China Hot kutengesa otomatiki akaomarara goko mota padenga remba tende yevanhu 2-3 vanoshandisa fekitori nevatengesi | Yuancheng
Yakaomarara kumusoro otomatiki mota padenga tende / yakaoma yepamusoro manual mota padenga tende
Matende Muenzaniso: YC-1704 / YC-1704A
Vhura saizi: 212cm * 132cm * 129cm.
Zvimiro: isina waya kure kudzora kana bhatani switch maviri-nzira kutonga otomatiki Push kusimudza tsvimbo, nyore mashandiro / chitarisiko, inokodzera maSUV emhando dzakasiyana dzemotokari / dzakachengeteka, dzakasununguka, dzakasimba, dzisina mvura, isina mvura, isina jecha, inotonhora / yakakodzera 2-3 vanhu vanorarama.
Zvinhu: ABS + ASA + sirivha yakaputirwa Oxford jira + aluminium chubhu + pearl donje pad + dema polyester mosquito mambure
Yakaomarara pamusoro otomatiki mota padenga tende / yakaoma pamusoro echinyorwa mota padenga tende / Camping mota padenga redenga
Car rooftop tent ine wireless remote control, nyore kushanda, kutaridzika kwakanaka, inokodzera vanhu 2-3 vanogara
* Pamusoro ganda: ABS + ASA;
* Muviri: 220g 2-akaturikidzana PU yekunamatira polyester machira (isina mvura: 3000mm);
* Matiresi: 7cm kukwirira EPE furo + inotakurika donje butiro
1. Rooftop tent ichishandisa yazvino otomatiki waya isina waya yekudzora tekinoroji, inogona kuvhurwa nekuvharwa neremote control, uye inogona kuitwa nemaoko kuburikidza necontrol mabhatani parutivi petende.
2. Matanho ekuregedza pamwe nekuburitsa ari nyore uye ari nyore, uye vanhu vaviri vanogona kupedzisa kurodha pasi nekuburitsa.
3. Chimiro: aruminiyamu chiwanikwa zvinhu
4. Maketeni emucheka haana kudzivirirwa nemvura
5. Kune mabhegi maviri eshangu kumativi ese etende, uye pasi peshangu dzehombodo dzakagadzirwa nemesh kuitira kuti Jecha nejecha ribude;
6.Marangwanda ane mabudiro emvura ekudzivirira mvura yemvura kuunganidzwa mugomba repasi;
7. Iyo yakapetwa yakaoma kumusoro kwetende inogona kushandiswa seyakafukidza mvura panzvimbo pechifukidziro chemvura chakaparadzana, chiri nyore kushanda
8. Matenga edenga akapasa bvunzo yeEMC.
Core Kubatsira: isina waya kure kudzora kana bhatani chinja mativi-nzira kutonga otomatiki push kusimudza tsvimbo, kusimuka mashandiro / chitarisiko, inokodzera maSUV emhando dzakasiyana dzemotokari / dzakachengeteka, dzakasununguka, dzakasimba, dzisina mhepo, isina mvura, isina jecha, inotonhora / yakakodzera 2- 3 vanhu vanogara.
Pashure: Manual kupeta denga denga
Zvadaro: Yakaomarara kumusoro kupeta ina-munhu denga remba
Vhara Pasi Pemotokari, Mota Waini Inotonhorera, 12v Mota Firiji Kutonhora, Mako Mota Inotonhorera, Inotakurika Mota Inotonhorera 12v, Yakakurumbira Car Roof Tent,